OLONA LASAN’NY RANOMASINA : Niala maina ny vedety fa Lalaina Zanadrano no nahita ny razan’ilay tovolahy
Raha tsiahivina, ny alakamisy 22 novambra dia tovolahy iray, avy any Manjakaray Antananarivo tonga miasa letisia, nandro teo amon-dranomasina Miou Miou Toamasina no maty natelin’ny rano. 26 novembre 2018
Ny andron’io ihany, dia efa nihetsika nitady azy ilay orinasa niasany. Nisy ny fampiasana vedety haingam-pandeha saingy niala maina. Ny andron’ny zoma, nanohy ny fikarohana ny razana ilay vedety haingam-pandeha.
Ny zoma antoandro, na dia mbola reraky ny asa letisia tamin’ny alina aza i Lalaina Zanadrano, dia noho ny fitiavana ny mpiara-belona dia tonga nanampy ny fianakaviana tamin’ny fikarohana ny razana. Lalaina zanadrano izay efa tsy vahiny amin’ny maro fa manana talenta voajanahary amin’ny fikarohana olona maty an-dranomasina. Ny volana septambra, dia izy no nahita ireo ankizy roalahy mpinamana samy niara-maty natelin’ny ranomasina teo amin’ny ranomasina Lisea Jacques Rabemananjara.
Ny sabotsy, nijanona nikaroka ny razana ilay vedety haingam-pandeha. Efa kivy ny fianakaviana. Nampanantena azy ireo hatrany i Lalaina Zanadrano fa tsy maintsy hitany izany razana izany.
Taranaky ny Zanadrano
Ny sabotsy 24 novambra tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro, dia hitan’i Lalaina Zanadrano tao amin’ny fari-dranomasina Ampanalana ny vata- mangatsiakan’ilay tovolahy avy any Manjakaray namoy ny ainy tao anaty ranomasina ny alakamisy.
Noporofoin’i Lalaina Zanadrano ny traikefany momba ny ranomasina. Niala maina ny vedety haingam-pandeha tamin’ny fikarohana fa i Lalaina zanadrano izay tanam-polo sy tsy mampiasa “masque de plongée ” no nahita ny razana. Sady milomano no misitrika izy mikaroka ny razana ary mahavita mijanona eny ambony ranomasina mandritra ny ora maromaro amin’ny maha zanadrano azy. Fihetsika izay tsy vitan’ olon-tsotra tsy zanadrano.
Mila fijerena akaiky ity tovolahy ity. Olona maro no miantso ny fanjakana mba hijery azy sy hanome asa sahaza azy. Voaresaka ny tokony han draisana azy ho mpiasan’ny mpamonjy voina. Hatreto mantsy, ankoatra ny asa mandalondalo izay ataony toy ny asa letisia, dia mitondra kalesa manary fako no asa fanaony andavanandro. Raha izao talenta sy traikefa ananany izao anefa dia tena olona ilain’ny firenena tokoa izy ka mila tohana sy ampiana. Ao Salazamay Toamasina ampitan’ny Pandora Club izy no mipetraka. Izy izay tsy manana finday akory fa izay mila azy dia tonga mijery azy mivantana any an-tranony.